February 2021 - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုမှုကို ဒီကနေ့ စတင်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အသုံးမပြုနိုင်ရေးအတွက်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတွေ၊ International Gateway ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူတွေ၊ ISP (Internet Service Provider)တွေအနေနဲ့ အကြောင်းကြားတဲ့အချိန်ကစပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက် အထိပိတ်ထားဖို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ လက်ရှိကာလမှာ အဖျက်အမှောင့် လုပ်နေသူတွေက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ရက်ကို
တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းလိုက်သည့်အတွက် နိုင်ငံအတွင်း ဆေးရုံပေါင်း (၇၀)ကျော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပညာရေးအဖွဲ့များက Civil Disobedience Movement Campaign ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့၌ စတင်ပြီဟု ကြေညာထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ လှုပ်ရှားမှုမှာ စစ်အာဏာသိမ်းသည့်လုပ်ရပ်အား ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်သည့်အနေဖြင့်
စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက်ရင် ကြံ့ဖွံ့ကို တိုက်ခိုက်ရင် အဲဒီလို တိုက်ခိုက်တဲ့ -အစိုးရပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်အမတ်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနီ လော်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် စာရေးဆရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ပလက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် NGO လိုလူမှု အဖွဲ့အစည်းတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ကဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ ဆန့်ကျင် သွားမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွှန်တော်တို့တတွေဟာ
၁။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် ပတ်သက်၍ သမာသမတ်ရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စစ်ဆေးပြီး ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်လာပါက ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မည်။ ၂။ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရန် ပြည်ပမှ မှာယူထားသော ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိလာရေးအတွက် လိုအပ်သည့် လေယာဉ်ဖြတ်သန်းခွင့် ကိစ္စရပ်များအား စည်ကမ်းများနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရမည်။ ၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ်မှာတုန်းက….. အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမပါဘဲ အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်ကြတယ်….ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက….ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို အထွေထွေသပိတ်မှောက်ဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တယ်…..ပြည်သူတွေကလည်းတာဝန်ကျေပါတယ်….. အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအကုန်နီးပါးသပိတ်မှောက်ကြပါတယ်…မမှောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်….. ဒီလိုနဲ့ အစိုးရ ယန္တရားရပ်သွားတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ခေါ်ပြီးအစိုးရနေရာပေးရပါတယ်…. နေမဝင်အင်ပါရာဖြစ်တဲ့ ဗြိတိန်တောင် လက်လျော့သွားရတယ်…. သတိပြုစရာအချက်လေးက….သပိတ်မှောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေ လစာမရကြပါဘူး….အဖြတ်ခံကြရပါတယ်….. ဒါပေမယ့် သပိတ်လှန်တဲ့အချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက….. သပိတ်မှောက်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကို လစာ အပြည့်ပြန်ပေးပါတယ်….မျက်နှာလိုမျက်နှာရ….သပိတ်မမှောက်ဘဲ ရုံးတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့…..တစ်ပြားမှမပေးခဲ့ပါဘူး……. အခုလည်း သပိတ်မှောက်မဲ့
မန္တလေးမြို့ရှိ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ ကုတင် (၃၀၀) ဆံ့ သင်ကြားရေးဆေးရုံ၊ ကုတင် (၃၀၀) ကလေးဆေးရုံ၊ ပြည်မြို့ ကုတင် (၅၀၀) အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးနှင့် ရန်ကုန် အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးတို့မှ လက်ထောက်ဆရာဝန်များက ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၃) ရက်နေ့မှစတင်၍ အလုပ်တာဝန်များ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ Civil Disobedience campaign ကို
ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်၊ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဆက်လက်ထားရှိကြောင်းသိရပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ဆက်လက်ထားရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ ပြန်မလွတ်သေးပါ။ အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုပြန်ကြားရေး မုံရွာအောင်ရှင်ကို ဧည့်ရိပ်သာတစ်ခုတွင် ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် နေအိမ်ပြန်လည်ရောက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မွန်ဝန်ကြီးချုပ် ပြန်လွတ်၊ အစိုးရအိမ်ရာတွင် အကျယ်ချုပ် ဆက်ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဒီစာကို နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနဲ့ ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ ခိုင်လုံတဲ့ အစိုးရသတင်းရပ်ကွက်က အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။ ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်ဘက်က တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။ တပ်မတော်၏လိုလားချက် ရက်စွဲ ၂၈-၀၁-၂၁၂၁ ၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်္ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင်
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ယာယီသမ္မတအဖြစ် ဆောင်ရွက်၊ အရေးပေါ်ကာလ ၁ နှစ်ကြေညာ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို အာဏာလွှဲ၊ မဲစာရင်း ကိစ္စ မရှင်းလင်းခြင်းနှင့် အဓမ္မ နိုင်ငံတော်အာဏာ ရယူသည့်အတွက် အခြေခံဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခြင်းထုတ်ပြန် ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေက ယာယီသမ္မတအဖြစ် တာဝန်ယူလိုက်ပြီး နိုင်ငံတော်ကို အရေးပေါ် ကာလ ၁ နှစ်သတ်မှတ်ကြောင်း